IBilly Bishop yaseToronto kwisiXeko seSikhululo senqwelomoya iQalisa kwakhona iNkonzo yoRhwebo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » IBilly Bishop yaseToronto kwisiXeko seSikhululo senqwelomoya iQalisa kwakhona iNkonzo yoRhwebo
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuqala ngokutsha kwesikhululo senqwelomoya saseBilly Bishop eToronto sisixhobo esibalulekileyo kwisicwangciso sokubuyiselwa kweSixeko saseToronto njengoko ukuqala kwethu kuthetha ukubuya kwemisebenzi, ukubuyela kurhwebo nokhenketho, kunye nokubuyela kwesango elibalulekileyo kwesinye sezixeko ezilungileyo umhlaba.
Isikhululo senqwelomoya saseBilly Bishop eToronto samkela inkonzo yorhwebo
I-Porter Airlines kunye neAir Canada zibuyela kwisikhululo senqwelomoya saseBilly Bishop eToronto.
Ukuqala ngokutsha kwezorhwebo kwenzeka kwisikhumbuzo seminyaka engama-82 yenqwelomoya yokuqala yenqwelomoya.
Isikhululo senqwelomoya sase-Billy Bishop eToronto sibhiyozele ukubuyela esibhakabhakeni izolo ngokuqala kwakhona kwenkonzo yenqwelomoya yenqwelomoya yiPorter Airlines kunye neAir Canada emva kokumisa okwethutyana ukusebenza ngenxa yobhubhane we-COVID-19.
Isikhululo senqwelomoya saseBilly Bishop eToronto kwiSixeko saseKapa sibhiyozela ukubuyela kwiNkonzo yoRhwebo ngeSpecial Water Canon Salute yokuHamba iSikhumbuzo
Ukuphawula lo msitho, inqwelomoya yokuqala yesikhumbuzo eya e-Ottawa eyathi yazinyaswa ngabachaphazelekayo kunye namaqabane "ayilungiselelwa ukuhamba" ngotyelelo olukhethekileyo lwamanzi olwalwenziwe liqela lika-Billy Bishop kwisikhululo senqwelomoya kwisikhululo senqwelomoya kunye nomlilo.
Isikhululo senqwelomoya saseBilly BishopAbasebenzi, abathathi-nxaxheba kunye namaqabane aseburhulumenteni baphawule olu suku kwaye banakana ukugqitywa kwexesha elinzima kushishino lokuhamba ngenqwelomoya ngokwamkela abakhweli ababuyayo nokubuyela kwishishini lokwenza unxibelelwano nokuxhasa uqoqosho lwaseToronto. Ukuqala ngokutsha kwezorhwebo kwenzeka ngokuchanekileyo kwi-82nd isikhumbuzo senqwelomoya sokuqala ngenqwelomoya kwisikhululo senqwelomoya ngo-1939.
UGeoffrey Wilson, u-CEO wamazibuko eToronto, umnini kunye nomqhubi wesikhululo senqwelomoya saseBilly Bishop, waye wajoyinwa nguNqulo lwakhe uJohn Tory, uSodolophu waseToronto, noMichael Deluce, uMongameli kunye ne-CEO ye IiPorter Airlines ngokunikezela ngezimvo zokubhiyozela umsitho. Abakhweli kunye nabasebenzi baphathwe ngokunikwa kunye namabhaso, kwaye isikhumbuzo senqwelomoya yokuqala eya e-Ottawa eyathi yazinyaswa ngabachaphazelekayo kunye namaqabane "abuyiselwe ukuhamba" ngotyelelo olukhethekileyo lwamanzi olwenziwa liqela lokuhlangula kwisikhululo seenqwelomoya kunye neqela lokulwa imililo.